Tram oo ka ambabaxay safarka Kabataş-Bağcedlar (Fiidiyow) | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKaamash-Bagcılar oo loo yaqaan 'Trampled Trading'
22 / 08 / 2016 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka, VIDEO
Taraamida ka dhigaya duulimaadka Kabataş-Bağcılar ayaa ka baxaya tareenka: Taraamida ka dhigaysa duulimaadka Kabataş-Bağcılar ayaa ka baxa tareenka ee Merter waxana uu ku dhufanayaa khadka sareeya. Qofka 3 wax yar ayuu ku dhaawacmay, halka adeegga tareenka la joojiyay.
Taraamida, oo u dhaxeysa Kabataş iyo Bağcılar, ayaa ka baxday tareenka waxayna ku dhuftey xargaha iyo caqabadaha ay ku xiran tahay xadhig sare. Iyada oo hoos imanaysa saameynta shilku si toos ah ugu dhuftey taraamka, dadka 3 way yar yaraayeen waxaana loo qaaday isbitaallada.
Tareenka Zeytinburnu-Bagcilar wuxuu joojiyaa sababo shil ah. Marka lagu daro adeegga taraamka, adeegyada basaska ayaa lagu daray. Shilkii ka dib, rakaabkii badankood ayaa sii waday cagta. Isagoo ka hadlaya shil gaari ka dib, muwaadin ayaa yiri, kadib markii aan sugin shilkii, waxaan isla markiiba tagnay. Waxaan ku soconay daqiiqado 15. "
Adeegyada taraamulka Zeytinburnu-Bagcılar
Shirkadda gawaarida ee Shiinaha ee CRRC ayaa si wadajir ah ugu maal-galisay Hindiya
Maanta taariikhda: 23 August 1991 East Express inta u dhaxaysa Haydarpaşa iyo Kars